:Bọchị: Disemba 8, 2019
A ga-enwe ọdụ ụgbọ oloko na mpaghara Gürsu nke Bursa ?; Ka emechara emume ala a na 2012, buru amụma ebe ụgbọ oloko 2 dị na Bursa, otu na Balat na nke ọzọ na Gürsu. ikpeazụ [More ...]
Ihe Zụọnụ na Bursa; N’izu gara aga… Atụmatụ mmefu ego nke Grandlọ Nnukwu Ndị Isi Obodo na-ekwurịta banyere mmefu ego nke Ministry of Transport. Onye nnọchi anya na onye isi oche nke GOOD Party Bursa bụ Prof.Dr. Dr. İsmail Tatlıoğlu jụrụ onye na-esote Mịnịsta nke 2: yapılan Mere na Bursa [More ...]
Anyi ghota na ndi politiciansanakkale na Balıkesir ndi ochichi mayors, ndi jikọtara olile anya ha nke ugbo elu nke ha rue Istanbul ma obu Ankara na ndi Ankara nke Ankara, enweela mmetụta, ma etinyela eriri Bandırma gbanwere na atụmatụ itinye ego. … N’ebe a kwa, ebum n’uche nke mmepụta ihe na mpaghara Central Anatolia iru n’ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ka a na-enwe mmetụta, kamakwa maka Bursa. [More ...]
A ga-eji ụgbọ elu mpụga Bursa rụọ nnukwu ọsọ ọsọ; A maara foto a ugbu a… E nwere usoro abụọ n'okporo ụzọ okporo ụzọ Bursa-Yenişehir-Osmaneli. Oge mbu nke oru akụrụngwa nke Bursa-Yeni worksehir bịaruru pasent 70. Enwere ike ịhụ isi ihe ole na ole nke ọrụ, mana nnukwu ọganihu [More ...]
Onye isi oche nke TCDD na General Manager Ali İhsan Uygun, osote onye isi njikwa ya na ndị nnọchite anya ndị a mere nlebara anya na eriri Ankara Sivas High Speed ​​Train line. İhsan Uygun, ụlọ ọrụ gbasara usoro mmepe [More ...]
Onye ọrụ ọhụụ na Eskişehir Metropolitan Women Parkomat Ga-enweta; Eskişehir Obodo ukwu ekwuputala na ọ ga-eji ndị ọkwọ ụgbọala buso ụmụ nwanyị na ịkekọrịta ihe ndekọ mgbasa ozi ọhaneze ya na ụmụ nwanyị ndị ọkwọ ụgbọala na-agbaso ihe ndị achọrọ n'ime obodo. [More ...]
Bursa Metropolitan Municipality Transportation ụlọ ọrụ Burulaş saịtị na Bursa Sea Ụgbọ ala (BUDO), Turkey Nkata 1. Aghọtara onye nkwado aha Gemlik Basketball Club, nke na-agbasi mbọ ike na Njikọ. Inye ulo akwukwo ebe emere ulo akwukwo di na Bursa, amateur [More ...]
Turkey, nke siworo online kemgbe 1973 afọ na-ewu ihe jupụtara n'ime a dị nnọọ mkpa ọdịiche na ndị mbụ na naanị ihe ọhụrụ katalọgụ ewu ọrụ taabụ nke katalọgụ, bụ ugbu a ndụ! AKW CKWỌ AKATK BUILDING B ,R,, gburugburu [More ...]
Karazọ ụgbọ elu Ankara Batıkent Metro Map na Ahịa tiketi - M1 BATIKENT METROS - Mwube nke metro Ankara nke mbụ malitere na Machị 29. 1993 akara metro dị n'okporo ụzọ Kızılay Batıkent [More ...]
Ankara Keçiören Metro Map Route na Tiketi M4 KEÇİÖREN METROSU - Mwube usoro metro n'okporo ụzọ Kızılay Gazino malitere na 15 July 2003. Mgbe obodo Ankara na-enweghị ike ịrụzu, [More ...]
Taa na History 8 Disemba 1874 Agop Azarian Company kwadoro mmezu nke ọnwa 12 dị ka onye nyocha maka iwu nke Belova-Sofia.